‘उर्वशी’ प्रेम र द्वन्द्व मिश्रीत प्याकेज होः श्रेष्ठ « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘उर्वशी’ प्रेम र द्वन्द्व मिश्रीत प्याकेज होः श्रेष्ठ
१२ मंसिर २०७०, बुधबार ४ : ३१ बजे
नेपाली चलचित्रमा संघर्ष गरिरहेका किशोर श्रेष्ठ सानैदेखीको रुचिका कारण अन्ततः नायक बनेरै छोडे। उनको भोगाईमा चलचित्रको नायक बन्नु त्यती सजिलो छैन जती चलचित्र हेर्दा महशुस गरिन्छ। एक दृश्यबाट चलचित्र करियर सुरु गरेका श्रेष्ठ चलचित्र ‘उर्वशी’बाट नायक बनेका छन्। श्रेष्ठसँग ठुलोपर्दा डटकमका जिवन पराजुलीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
किन चलचित्रमा आउनुभयो ?
– सायद रुचिको बिषय भएर म चलचित्रको नायक हुन पुगेको हुँ। मेरो सानैदेखीको अकाट्य रुचि थियो कलाकारिता अहिले पुरा भएको छ। म अन्य व्यावसायमा आवद्द त छँदैछु।
रहरमा मात्र सिमित हुने हो की व्यावसायिक नायक बन्ने हो ?
– त्यति धेरै ठुलो लक्ष्य त मैले लिएको छैन। मेरो चाहनाले यहाँसम् ल्याएरै छाड्यो। म हरेक तवरबाट परिपक्क नायक हुन सकेँ भने अवश्य व्यावसायिक हुनेछु। अन्यथा सकिनसकी नायकको रेशमा हुँदिन होला। अब मेरा काम दर्शकको नजरमा पर्दैछन्। यसबाट के पाउँछु त्यसमा भर पर्छ। सक्षम ठहर भएका चलचित्रलाई मेरो कार्यक्षेत्र बनाउँछु।
आजकल त लगानी गरेर हिरो हुने चलन छ, तपाईँलाई त्यतै मिसाउन मिल्छ ?
– मलाई थाहा थिएन, यो क्षेत्रमा त्यस्तै रहेछ तर मेरो सवालमा बिल्कुल फरक कुरा हो। यसअघि साना भुमिकामा मैले २ वटा चलचित्रमा काम गरिसकेको छु। निर्देशक मनिष पन्थले मेरो अडिसन लिएर नायक बनाउनुभएको हो। क्याम्पस पढ्ने ठिटो स्वरुपमा खोज्नुभएको थियो। मलाई नजरमा पार्नुभयो र यो अवसर पाएँ। मलाई पैसा तिरेर हिरो बन्नु नै थिएन र त्यसो भएन पनि। कतिपय युवाहरुले अवसर नपाएर पैसा लागानी गरेर भएपनि आफ्ना रहर पुरा गरेको देखेँ। म एकैपटक जम्प नगरेको हुनाले होला न त्यस्तो सोचाई आयो न त कसैले त्यस्तो कुरा नै गर्नुभयो।
चलचित्रमा आउने यात्रा कस्तो रह्यो ?
– मैले सबैभन्दा पहिले छविराज ओझाको चलचित्र ‘अन्दाज’मा मात्रै एक दृश्यमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। निर्माता ओझाले मेरो कामको विश्वास गर्नुभएछ क्यारे अर्को चलचित्र ‘रावण’मा मलाइ सहनायककको भूमिका दिनुभयो। ‘रावण’बाट मेरो केहि प्रोफाईल बन्यो। अभिनयमा अन्दाज पहिलो भएता पनि नायकको रुपमा ‘उर्वशी’ नै मेरो पहिलो चलचित्रको। यो चलचित्रमा मेरो मेहनत र लगनशिलता देखेर निर्देशक पन्थले मलाइ नायक हुनै मौका दिनुभयो।
तपाईको नजरमा ‘उर्वशी’ के हो ?
– उर्वशी त स्वर्गकी परीको नाम हो। यो चलचित्रमा भने नायिकाको नाम उर्वशी राखिएको छ, सोही आधारमा चलचित्रको नाम नै उर्वशी रहन गयो। यो चलचित्र कमर्शियल चलचित्र हो। ‘उर्वशी’ प्रेम र द्वन्द्व मिश्रीत प्याकेज हो।
दर्शकले के पाउने ?
– पूर्ण मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। दुई घण्टा हलभित्र रहँदा तनाव पक्कै हुँदैन।
चलचित्रमा तपाईँको चरित्र के हो ?
– सामान्य प्रकृतिको मानिसले पनि अन्याय विरुद्द उठ्न सक्छ। अन्तिम अवस्था आयो भने सामान्य मानिसले ठुला मानिसको सत्ता पल्टाईदिन सक्छ। मेरो चरित्रले यहि जनाउछ।
चलचित्रमा ‘लभर व्याय’ हुनुहुन्छ। तपाईको नजरमा माया के रहेछ ?
– माया बिना संसार अधुरो, अपुरो छ। मानिसको जीवनबाट माया भन्ने चिज हटाईदियो भने शुन्य हुन्छ। ध्रुवसत्य कुरा जन्मे पछि मृत्यु छ, त्यो बीचमा माया बाहेक अरु केहि छैन।
‘उर्वशी’ छायांकनका बेला घटेको कुनै अबिष्मरणिय क्षण छ ?
– छायांकन अवधीको सुरु देखिनै एकदम रमाईलोसँग बित्यो। सिनियर कलाकारसँग धेरै सिक्ने मौका पाएँ। छायांकनको बेलाको एउटा दृश्य चाहिँ अबिष्मरणिय नै छ। टेलिफोन बुथलाई गाडीले उडाउनुपर्ने थियो। पाँच वटा क्यामेराले खिचिँदै थियो। एक टेकमा नै फत्ते गर्नुपर्ने थियो। अन्यथा तीन दिन पुनः सो सेटको लागि समय लाग्थ्यो र पाँच सेकेण्ड मात्र ढिला भएको भए म आज यहाँ हुने थिइन। तर, एकै टेकमा सो काम सफल भयो। औधी खुशी लाग्यो। चलचित्रमा सो दृश्य समावेश छ, मंसिर १४ मा हलमा जानुहोला। यो कुरा र त्यो दृश्यसँगै सम्झनुहोला कति डरलाग्दो थाहा पाउनुहुनेछ।
– मेरो परिक्षाको निर्णायाक दर्शक हो। उहाँलाई मेरो कामको मुल्यांकन सुम्पेको छु। पास या फेल जे बनाउनुहुन्छ उहाँहरुकै हातमा छ। ‘उर्वशी’ एकपटक हेर्नैपर्ने चलचित्र हो।